မေလ 2015 |5၏စာမျက်နှာ 16 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » မေ (စာမျက်နှာ 5)
Space ကို (Black က) မှော်! Interstellar!
ဒါဟာဒါဟာ HAYABUSA II ကိုရဲ့ ... ဒါဟာလေယာဉ်ရဲ့ ... တစ်ဦးငှက်ရဲ့! ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက, JAXA (ဂျပန်အာကာသယာဉ်လေ့လာရေးအေဂျင်စီ) Tanegashima အာကာသစင်တာမှမှာ Yoshinobu ပစ်လွှတ်ရှုပ်ထွေးထံမှ Hayabusa လိုင်းအတွက်၎င်း၏ဒုတိယမစ်ရှင်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ HAYABUSA ငါအာကာသစူးစမ်းရှာဖွေရေးအတွက်အများအပြားပထမရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါမစ်ရှင်မစုံလငျခဲ့ပေမယ့် 1000 နာရီကျော်များ၏အသုံးစရိတ်အပါအဝင်အတော်လေးနည်းနည်းပြည့်စုံ ...
Riedel ဆက်သွယ်ရေးဂီယာ၏ဖန်တီးမှုနည်းပညာကိုချဲ့ထွင် Store က
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - မေလ 21, 2015 - ကို Creative နည်းပညာ (မှန် CT), A / V ကိုသုံးစက်ကိရိယာများကိုကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပေးသွင်းတ Riedel ဆက်သွယ်ရေး '' ရှေ့ဆောင် Real-time ဗီဒီယို, အသံဖိုင်, ဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်၎င်း၏ထောက်ပံ့ရေးတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ပင်အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများ enviroments မှာခြွင်းချက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးအင်ဂျင်နီယာ, အ Riedel စနစ်များကိုဆက်သွယ်ရေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကို Creative နည်းပညာရဲ့စွမ်းရည်ကိုအထောက်အကူပြု ...
SMPTE အဖွဲ့ဝင်များ CinemaCon 2015 မှာသက်ရောက်မှု Make
လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် Key ကိုမေးခွန်းများအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, Motion Picture စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ White Plains, နယူးယော့မှအလှူငှမြေားအတှကျအသိအမှတ်ပြုရယူနိုင်သော - မေလ 20, 2015 - Motion Picture ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (R) (SMPTE (R)), ရွေ့လျားမှုအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် -imaging စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေး, ပါဝင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအောင်မြင်သော CinemaCon 2015 ထရစ်ပတ် ...
Vodafone စပိန်နဲ့ဗလင်စီယာဘောလုံးကလပ်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' Vibe VS4 အသုံးပြုခြင်း 7000G LTE ကိုအသံလွှင့်ဖြန့်ဖြူး၏အောင်မြင်သောစမ်းသပ်ဖြည့်
မေလ 7000, 22 - - eMBMS-အဆငျသငျ့ Vibe VS2015 ဗလင်စီယာ CF ပရိသတ်များ RENNES, ပြင်သစ်မှမကြုံဖူးသောငါးခုတစ်ပြိုင်တည်း HD ကိုလိုင်းများဖြန့်ဝေဖို့ Encoding ပလက်ဖောင်းပေးသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကယနေ့င်း၏ဆုရ Vibe (R) VS7000 Multi-screen နှင့် HEVC အန်ကုဒ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် မေလ 17 တခုတခုအပေါ်မှာ LTE ကိုအသံလွှင့်ကွန်ယက်၏စပိန်ရဲ့ပထမဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစမ်းဘို့ Vodafone စပိန်နဲ့ဗလင်စီယာဘောလုံးကလပ်ကရွေးချယ်။ ...
အမေရိကန်ဖောက်သည်တစ်အနာဂတ်-သက်သေပြချက် IP ကိုရွှေ့ပြောင်းမဟာဗျူဟာဆောင်ခဲ့: InfoComm 2015 မှာ Barnfind အမေရိကတိုက်
InfoComm 2015, Barnfind အမေရိကတိုက်မှာ InfoComm 5264 Barnfind အမေရိကတိုက် Booth 13 ဇွန်လ 19-2015 ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်၏မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်မှာ IP ကိုစစ်ဆင်ရေးချောမွေ့နှင့်ရိုးရှင်းဖို့ဒီဇိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၎င်း၏မိသားစုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် - သူ့ရဲ့ flagship BarnOne ဘက်စုံသုံး signal ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်း, BarnMini ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအပါအဝင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး devices များနှင့်အသေးစားပုံစံ-Factor pluggable ၏မိသားစု (SFP) ကိရိယာများ။ ဤတွဲဖက်အလုပ်လုပ် ...
Fleetwood Mac ကိုလှည့်လည်ဘို့ Diablo ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ 128-Track မှတ်တမ်းတင်ဖြေရှင်းချက် Sonnet: Echo Express ကို III ကို-R နှင့် RackMac mini ကို Features
End User Clair ကို Global Avid Pro ကို Tools များ / Fleetwood, Mac ၏ "Show ကိုအတူတွင်" Tour Irvine, ကာလီဖိုးနီးယား၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့် Flexible မှတ်တမ်းတင်ဘို့ Sonnet မှတ်တမ်းတင်လုပ်ငန်းအသွားအလာအပေါ်မှီခို - ။ မေလ 19, 2015 - Sonnet Technologies ကယနေ့ယင်း၏: Echo (TM) Express ကို III ကိုကြေညာခဲ့သည် -r Thunderbolt (TM) 2-to-PCI Express (R) (PCIe (R)) Apple အတွက်ကဒ်တိုးချဲ့ကိုယ်ထည်နှင့် RackMac (TM) mini ကို 1U ဝင်း (R) နဲ့ Mac (R) mini ကိုတစ်ဦး State-Of-The မောင်းနှင်နေကြသည် -art ...
ပုံမှန် SUNY ပါမောက္ခ Forscene Professional ကလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအစီအစဉ်ဖွံ့ဖြိုး
လန်ဒန် - မေလ 21, 2015 - စျေးကွက်-ဦးဆောင် Forscene ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲတားမြစ်ထား, ထုတ်လုပ်သူများ, Forscene ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ဖတ်စာအုပ်နှင့်လက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတိဗ် Keeler, နယူးယောက်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် (SUNY) မှာပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုပါမောက္ခအတူတက် teaming ဖြစ်ပါတယ် post-ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများ။ အဆိုပါစာအုပျနဲ့ program ကိုစပိုင်းတွင် certified ရရှိထားပြီးဖြစ်လာဖို့ SUNY ရဲ့ Cayuga အဘိဓါန်ကွန်မြူနတီကောလိပ်၏ကျောင်းသားများအတွက် enable ပါလိမ့်မယ် ...
ကုန်စည်ပြပွဲ Cine ဗီဒီယိုရုပ်မြင်သံကြား 2015 မှာ Show ကိုတွင် axon
ကုန်စည်ပြပွဲ Cine ဗီဒီယိုရုပ်မြင်သံကြား 2015 (မက္ကဆီကိုစီးတီး, 16-19 ဇွန်လ) မှာထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံအထူးကု axon ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်းက၎င်း၏ရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက် Comtelsat (B4 ရပ်) နှင့် Sistemas Digitales (D12 ရပ်) မှတဆင့်၎င်း၏ကြီးမားသောထုတ်ကုန်အစုစုကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ Ethernet ကျော်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကို: အာရုံခံပြပွဲကာလအတွင်း AVB ရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ applications များ axon ရဲ့ဆုဆုများကိုလည်းကောင်းအာရုံခံထုတ်ကုန်အကွာအဝေးမှတဆင့်ပြသပါလိမ့်မည်။ အာရုံခံဆဲလျ (တိုက်ရိုက်) Real-time ဖွ ...